Description: Camera 360 waa mid ka mid ah barnaamijyadooda camera ugu caansan heli karo telefoonada smart. App ayaa waxay keentaa gacanta ku xirfadeed heer buugga iyo qoreysa ay weheliyaan astaamaha tafatirka xiiso leh. Waxaa sidoo kale la yimaado qaabab kala duwan camera, in badan oo sida diirada gaar ah, album daruur oo lacag la'aan ah, qaababka la wadaago, qalab tafatirka xirfadeed iyo ka badan.
User Interface Great
Extra bixi karo baakado, saamaynta iyo Muuqaallo
Xulashada u ballaaran oo ku saamaynta
Taabo inay is barbar dhigaan feature
App Camera mar mar ku qasbi xiranto
Ka maqan muuqaalada tafatir sida abuurka, red-indhaha u qaadidda iwm
Awoodin in ay isticmaalaan sawirada file
Description: Cymera caan app kale sawir android waxana laga heli karaa Google Play dukaanka. Everton iyo muuqaalada camera awood badan, app ee waxay kale oo keentaa ton oo muuqaalada tafatirka. Interface ayaa camera ah Cymera ka mid ah tiro ka mid ah lenses awood badan sida Focus, Anti-gariireen, Convex iyo in ka badan.
Dooro ka xulashada weyn ee muuqaalada tafatirka
Samee Wehbe sawir
La wadaag collages aad by warbaahinta bulshada iyo email
App ayaa dareemi kartaa xoogaa wareer inta aad muuqaalada u soo gotaa yara
Qaar ka mid ah dadka isticmaala ay ku haysato arrimaha xasilooni
System: Android iyo macruufka
Waxaa lagu talinayaa in xiddigaha: 4.3
Description: Retrica beddesho doonaa waayo-aragnimo sawir wax si dhab ah xusuus. Waxaad dooran kartaa sida aad u rabto in la xasuusto in aragtida weyn ka safarkaaga, ama hadhuudh ah delicious aad la wadaago saaxiib. Iyada oo sida diirada live Retrica ee, aad ku eegaan karo sida ay sawiro aad eegi doonaa, xitaa ka hor inta aad sawirka qaado. Waxa kale oo la Timaadda logos rayn ah si ay u sameeyaan sawirada aad ka sii ogaan karo. Oo weliba, iyadoo in ka badan 100 filtarrada, marnaba ma ordi doonaa ka mid ah fursadaha.
Si buuxda u ciyaarin
Qaar badan oo sida diirada waqtiga dhabta ah
4. Eebaha 365
Waxaa lagu talinayaa in xiddigaha: 4
Description - Iyadoo Eebaha 365 aad si fudud u xoojin karto Wehbe. Waxaa la iman in ka badan 20 qalab qurux awood leh in laguu ogolaado in aad si astaysto sawiro aad riixi siyaabo badan oo kala duwan. Qaar ka mid ah waxyaabaha aad samayn karto waxaa la yihiin - erya ceebaalowyo, masixi wareegyada indhaha, iftiimin maqaarka iyo indhaha oo jilci muuqaal ah sida loogu baahdo.
Codso ilaa darsin Styles Hot dhibaatooyinka qurux qurxiyo dagdag ah oo leh hal taabashada q
Hel Falanqeynta deg dega ah ee noocyada kala duwan ee isku qurxiyo aan maal waqti badan ama lacag
Gacanta ku granular Deep u maqaarka, Face, Indhaha iyo Afka
Aad sax oo ku habboon dhibcood wajiga statistics
Ma badbaadiyo shaqada ee horumarka sida mashruuc ka shaqeeya, sawirada halkii aad kara keliya maahee dhameystirtay
Waxaad si ay u ogalanaya saamaynta tihiin kuwo dooni inuu ku soo laabto, waxa uu
La'yahay feature ah u bedelo sunnayaasha
Description: PicShop Photo Editor waa premium tafatirka sawir xirmada qalabka la tiro balaadhan oo ah muuqaalada; ka filtarrada iyo saamaynta inay iska faaidaysan iyo meme jiilka shaqeynta, waa qalab aad u awood badan oo app muhiim ah oo loogu talagalay dadka kuwaas oo ay Android sawir qaataan si dhab ah.
Qurux badan iyo customizable interface user
Jiireen la shaqeynta weyn iyo muuqaalada
Easy in ay isticmaalaan la tutorial weyn
Waxaa lagu talinayaa in xiddigaha: 4.9
Description: Snaptastic waa aalad tafatirka sawir qurux badan oo awood leh qalab Android aad. Muuqan filtarrada pre-set oo kala duwan oo ka mid ah customizations buuggan, waxa uu siiyaa boosteejo ah oo qaar ka mid ah oo faahfaahsan oo cajiib ah uqaadineed sawir.
Interface user cajiib ah
Badan fursadaha Customization, labada-set pre iyo buugga
Simple in ay isticmaalaan
Waxa uu ka shaqeeyaa labadaba sida sawirka ama muuqaalka hab
Ma app jaban waxaa si kastaba ha ahaatee waxaa jira version freebie heli karaa sifooyinka yar
Description: FunCam waa app ah camera qabow oo si sahlan loo isticmaalo in bixisaa qaar ka mid ah sida diirada raadinaya weyn oo aad ka arki kartaa in waqtiga dhabta ah. La mid ah in ay barnaamijyadooda caanka ah waxaana dib loo eego ka hor, FunCam waa xal nidaamsan la filanayaa sawiro aad.
Nice kala duwan ee sida diirada in aad ka fiirin kartaa in-waqtiga dhabta ah iyada oo aad siladda
Ee ha waxaad codsan safeeyahan si sawirro horeba aad gallery
Kordhi / yaraadaan heerka saamaynta
Qaraarka Image kaliya ilaa 3MP
No version ad-si xor ah u doorato
No taageero video
Description: Iyada oo Instagram, waa ay fududahay in la qaato SNAP ah, ku dar filter ah oo geliyaan. Waa mid aad u degdeg ah oo weyn oo la wadaago sawiro aan joogtada ahayn. Filtarrada ayaa dhab ahaan magacyo faanid ah ee mobile sawir hiwaayadda iyo waa ay fududahay in la isticmaalo.
Set Nice ee sida diirada u ku sameeyo sawir aad degdega ah
Aad u fududahay in la isticmaalo qaybsiga sawir iyo adeegyada bulshada daahfurka
Aad degdeg ah oo ajiibaa
Ka maqan fursadaha kala duwan ee saamaynta
Shaandhada ka yar dhowr barnaamijyadooda kale Android
Ma shaqeeyaan qalab gaar ah, uusan si fiican u taageeraan dadka kale
Halkee camera uma shaqeeyo, ma sii dayn doonaa inaad geliyaan ka card SD aad
Doorashada yaryar ee xuduudaha, saamaynta badan ma ay lahayn, ma wareejin ah usii ama qalabka tafatirka
Ka maqan muuqaalada macruufka, sida shaandhada-waqtiga dhabta ah sareeysa ee camera
9. Pixel fiicni
Description: Pixel fiicni waa aalad tafatirka sawir qurux badan. Haddii aad ku raaxaysato sawirada tweaking gudahood ah interface user Begovic, tani waa aragti aad u, halka aan shabakad bulsho, sida Instagram .
UI qurux badan
30 filtarrada, 24 layers film iyo 16 looxyada
Codso saamaynta badan waqti isku mid ah
Save gaynta aad jeceshahay
Easy in ay wadaagaan aad ka Foogaada inaad Liibaantaan
Qasaarooyinka: maqan ka go'an muuqaalada tafatirka, abuurka, usii-wareeg iwm
Description: The Pro Camera DSLR waa app ah u isticmaala Android raadinaya buuxa ku app camera xirfadeed. App ayaa la soo saaray iyadoo kulakiisii ​​Software, oo sidoo kale waa kooxda ugu danbeeya app kale oo wanaagsan, Camera ka Manual. The Pro app Camera DSLR uu leeyahay qaar ka mid ah muuqaalada runtii awood badan buuxiyey oo ku yaal interface wanaagsan.
Gui raadinaya Good
Hawlaha camera badan oo
Sida loo Download Spotify Android
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga HTC in Android
> Resource > Android > 10 Apps Camera Best u Android